छोरीलाई जन्मनै निषेध : पढेलेखेका र क्रान्तिकारी भनिएका पनि छोरा नै चाहन्छन् – Nepali Health
छोरीलाई जन्मनै निषेध : पढेलेखेका र क्रान्तिकारी भनिएका पनि छोरा नै चाहन्छन्
पहिलो सन्तान छोरी जन्मिए दोस्रोपटक लिंग पहिचान गरेर गर्भपतन गर्ने प्रवृत्तिले छोरीको जन्म नै घट्दो
२०७५ साउन २८ गते ८:५५ मा प्रकाशित
काठमाडौँ, २९ साउन । नेपालमा पुरुषभन्दा महिलाको संख्या करिब ८ लाख बढी छ । तर, छोरी जन्मने क्रम हरेक वर्ष घट्दै छ । छोरीको जन्मदर अहिलेकै अनुुपातमा घट्दै जाने हो भने केही वर्षभित्रै देशमा लैंगिक असन्तुलन आउनेछ ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागको प्रक्षेपणअनुसार ९०६८ को राष्ट्रिय जनगणना० एक सय २१ छोरा जन्मिँदा सय मात्र छोरी जन्मिन्छन् । सबैभन्दा धेरै प्रसूति सेवा दिने थापाथलीस्थित प्रसूतिगृहको तथ्यांकमा पनि ५४ प्रतिशत छोरा र ४६ प्रतिशत मात्रै छोरी जन्मिएका छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको परिवार स्वास्थ्य महाशाखाको तथ्यांकनुसार आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा देशभर एक लाख ७७ हजार २ सय ५३ छोरा जन्मिए । सोही वर्ष जन्मिने छोरीको संख्या भने एक लाख ६६ हजार ३ सय २४ मात्र थियो ।
त्यस्तै, आब ०७२/७३ मा एक लाख ८६ हजार ८ सय १७ छोरा जन्मिँदा एक लाख ७३ हजार ४ सय ९६ मात्र छोरी जन्मिए । आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा एक लाख ४७ हजार ४ सय २४ छोरा जन्मिए भने एक लाख ४३ हजार ४ सय १६ मात्र छोरी जन्मिए ।
प्रसूतिगृहमा आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा १८ हजार ७ सय २० बच्चा जन्मिएका थिए । तीमध्ये १० हजार १ सय ३ छोरा र ८ हजार ६ सय १७ छोरी थिए । आब ०७२/७३ मा ९ हजार ९ सय २७ छोरा र ८ हजार ३ सय ८५ छोरी जन्मिए । त्यस्तै, ०७१/७२ मा १० हजार १ सय ९२ छोरा र ८ हजार ६ सय २१ छोरी मान्छे जन्मिए । आव ०७०/७१ मा ९ हजार ९ सय ५३ छोरा र ८ हजार ७ सय ९० छोरीको जन्म भएको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ ।
तथ्यांक विभागका सूचना अधिकारी प्रमोदराज रेग्मीका अनुसार नेपालमा छोरीको जन्मदर भारतमा भन्दा धेरै कम हुँदै छ । भारतमा एक सय ११ छोरा जन्मिँदा सय मात्र छोरी जन्मिन्छन् । त्यस्तै, सिंगापुरमा एक सय ७ छोरा जन्मिँदा सय छोरी जन्मिन्छन् । यो अनुपात २५ वर्षदेखि स्थिर छ ।
राज्यका निकायमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढ्यो भनेर हामी गर्व गर्छौँ । तर, हामीकहाँ छोरीको बाँच्न पाउने र जन्मने अधिकार नै खोसिँदै छ भन्ने तथ्यलाई नजरअन्दाज गरिरहेका छौँ । सुरक्षित मातृत्व र सुरक्षित गर्भपतनको अधिकार दिने भनेर हामीले कानुन बनायौँ, सेवा सुरु ग-यौँ । तर, समाजमा रहेको पुरातनवादी पितृसत्तात्मक सोच बदल्न सकेनौँ । एक ठाउँमा गएर लिंग पहिचान गर्ने र अर्को ठाउँमा गएर छोराछोरी जे भए पनि मलाई पुग्यो, अनिच्छित गर्भ हो भनेर पतन गराउने परिपाटी बढ्यो । अब कानुन पनि कडा बनाउनुपर्ला । अन्यथा पछि गएर यसले सामाजिक विकृति निम्त्याउँछ ।
पढेलेखे पनि, क्रान्तिकारी भए पनि छोरा नै चाहन्छन्
डा. तारानाथ पोखरेल,
पूर्वनिर्देशक, परिवार स्वास्थ्य महाशाखा
नेपालमा जतिसुकै पढेलेखे पनि, क्रान्तिकारी भए पनि छोरै होस् भन्ने चाहना राख्छन् । कुल जन्मदरमा छोराको संख्या धेरै छ र त्यो किन भइरहेको छ भन्नेबारे विस्तृत अध्ययन जरुरी छ । अप्राकृतिक कारण हो भने त्यसलाई कडाइका साथ रोक्नुपर्छ । कानुन कडा बनाउने विषयमा सोच्नुपर्ने वेला भइसकेको छ । जनचेतनामूलक कार्यक्रम पनि चलाउनुपर्छ । अन्यथा केही समयपछि जन्मदर अन्तरले सामाजिक समस्या निम्तिन्छन् ।
३ लाख २३ हजारले गत वर्ष गर्भपतन गराए
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा तीन लाख २३ हजार महिलाले सरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट गर्भपतन गराएका छन् । तीमध्ये ५८ प्रतिशत महिलाले असुरक्षित गर्भपतन गराएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको परिवार स्वास्थ्य महाशाखाको भनाइ छ । महाशाखाअन्तर्गत सुरक्षित मातृत्व शाखाकी प्रमुख डा. पुण्या पौडेलका अनुसार औषधि पसलबाट औषधि किनेर ‘मेडिकल एबोर्सन’ गर्नेहरूको संख्या जोड्ने हो भने गर्भपतनको तथ्यांक अझ बढ्नेछ । ‘आफैँ औषधि किनेर गर्भपतन गर्नेहरूको संख्या थाहा छैन,’ उनले भनिन्, ‘हरेक औषधि पसलमा उपलब्ध छ, डाक्टरको प्रेस्किप्सनविना पनि बेचिरहेका छन् ।’
आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा अर्जुन पौडेलको समाचार
चिकित्सकीय लापर्वाही, कानुनी व्यवस्था र अहिलेको विवाद
स्वास्थ्य बीमा बोर्डको कार्यकारी निर्देशक खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट छनौट गरिने